Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA | Aarsaa Kakuu branca amb els ministeris del Nou Pacte
Wal-Dhabdee Fúria →
Dhuga fil baatuun Mare Naan Argee dhaga'e important per DHA. La mare Naan Naan Argee fil dhaga'e namaa dhoksuu és ndmiti keenya és komana. Naan flexibles en la pau Idhu ARGE Tokko important per Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. En virtut de la pau Naan gaarii Tokko ARGE flexibles IMMO dhoksu molt gaarii hirmachu namaa flexibles Hin barbane DHA.
MARE: Qoricha flexibles dhukufate Tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? Llauna IMMO sanaf Nama es menja dhoksita? Namni sun qoricha sana dhabuudhan yoo du’e, yoo yoo naafate en kkf irracional irracional ga'e TIC gafatamin sii jira lataa?
MEE Chitti YAADII: Qoriicha isa hibbo recepció SIIF hiike, isaa dukkana Kee ECBI, pare de Kee yello SII irracional Kaase, Isaa jireenya SIIF un correu NAMA akkata Kee keessa quedat sana dura Jala dhoksa Jirata immo TIC agarsiisa jirta?
SEENSA: Botiga-buutoni Yesus Warri ajjefamu Gooftan isaani irracionals poden vagar dhaban ka'e gaddan miidhaman Turan Goofticha ISAAA du'a ka'e waliin deebi'an Wal-argan. Gooftchi Nagaa isaani deebisef. Akka hubataniif Samu Isaan Isaan Isaan baneftu Karra irracionals Buse. Fayyun, wamamun, Nagaa argachun akkasuman utuu Tane temps dhimma Goofticha irratti ittin boba'uuf. Luqaas Mel 24:36-52cts dubbiis.
Yesus Jara com yeroo deambulen gafatu "”Haa isiniif Nagaan Ta'u!” jedhetu. Sigui hiika Maal salt Jetta (24:36)?
Nasu yara Yesus attamitti kesumsiise (24:38-43)? Kana irracionals Maal Barata?
Yaadachi Yesus (24:44) Patti maaliif barachise em fakkata?
Macaafa és bachuu fil ittin jirachuun (24:45) attamin danda'ama? Kun terra SII barsiisa?
Dhamsi Yesus bartoota isatti ficció actual és ndumaf dhiise dhamsa attami kun tu (24:46-47)?
Dhamsa com Bakkan ga'uuf hi (24:4901:00) attamitti barbachiisa? Waa'ee hi Maal com el Batta?
Halli baratoota Jesús Inní 24:36 ser 24:52 garagarumma attami qaba? Garagarummaan kun Maal irracionals Argame?
Goofta va aconseguir collaret de geedaru, Gadda Kee ni danda gammachuutti jijiruu ser isaatti del GATT. Les TIC a l'esquerra Humna haama keessa ittin darbitu si Akka i amb SIIF keenuuf kadhadhu.
"Kristosichi dhiphachuuf, guyyaa sadaffaattis súplica ka'uuf Akka Njiru caafameera ... ". Waaqayyo woo Naan servei és danda'a, maaliif dhiphachu Yesus barbachiise?
Waaqayyo namoota Akka keenya Parra cubbun takalamne, Nagaa dhabne, passions de ràdio sabor, ra de treball en el TAG joraa Karra ilmaa isa nuu WAAME. Cubbu keenya nuuf dhiise, ofitti nuu araarse, hidhaa keenya hiike, dukkana keenya ECBI, Nagaa 1 nuuf Kenne, dhiifama cubbu fi fayyina bara baraa isa karra Yesus Kristos Goofta keenya nama hundumaaf qophaa’e akka labsnuuf nuu erge. Wangeela fayyina com labsnun Eega Chitti gafatama keenya.
Wangeela fayyina labsuun dhimma attatamaa fil dhimma dhimma s'atrofien garara ta'e DHA. Waamichi keenya dhimma com Bakkan ga'uf Ta'u isa dagachuun nuu irracionals Hin Njiru. Dhimmi kun dhimma dhuunfa keenya és nduman ol qaba Ta'u. Dhimmi keenya és ndunuu dhimma garuummaa fil Tola Waaqayyo labsu kanaf gugufutu comí irracionals. Dhimmi Gaafa Birán dhufe dret dhimma Català Ta'u barbadu IJA keenya Gooftatti perquè kanfne Català, Naan és ara molt barbadu jaamsu s'aniria Faana Tokko fudhane, Irracional faaganne TIC yaaduu qabna. Loltuun lolaf ba'e lafaa lolatti immo dhimma Birán qabame dhimma waamicha isa dagatu immo utuu si les TIC i amb el temps yaadiin xiyyan Dinna isa Argatà. Yoo isa keenya dhimma am Bakka ga'u dandeenye iyyu, dhimma anem deixava Yoo isa keenya irranfane vertebral irracionals namoota gadamuufin Njiru complir. Dhugumatu "en virtut de la pau Biyya útils guutummaatti buufatee, ISAAA lubbuu garuu Yoo dhabe, bu'aan isaa Maali REE?" (Mar 8:36)
Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA — 3 Comentaris
REBIRA IFA en Gener 12, 2017 en 7:56 a la dit:
REBIRA IFA en Gener 12, 2017 en 7:55 a la dit:
mesfin neme en Juny 25, 2012 en 8:58 a la dit: